Finland Myanmar Society Ry | Y-tunnus 3190312-2
Meet The Gen.Z
Finland Myanmar Society Ry can do so much with so little,
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) အား ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဟယ်စင်ကီးမြို့၌ စတင်တည်ထောင်သည်။
The Finland Myanmar Society Ry isasecular, non-partisan and non-profit making organization established in February 11, 2021. We aims to promote social and cultural integration of Burmese in Finland and foster and promote cultural heritage of Myanmar.
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် တရား၀င်မှတ်ပုံတင်(အမှတ်စဥ် 3190312-2) ကာဖွဲစည်းထားပြီး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များ(donor)၏ အလှူငွေများ (donation) အား တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လက်ခံကူညီပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
The Finland Myanmar Society Ry aims to promote the knowledge of Myanmar's culture and economic life in Finland, to build links between Finns & Myanma and to promote cross-country cultural exchange. The association does not deal with political parties.
ရရှိလာသည့်အလှူငွေစာရင်းအား သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်များဖြင့်စီစစ်ပြီး၊ အလှူရှင်များထံသို့လည်းကောင်း၊ ဖင်လန် အစိုးရစာရင်းစစ်ဌာနနှင့် ပြည်ထဲရေးဌာနသို့ပုံမှန်စာရင်းတင်သွင်းနေသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
The Finland Myanmar Society Ry aims to strengthen its activities asacultural association by organizing various kinds of own activities and cooperating with other parties interested in Myanmar.
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့၀င်ကြေး၊ ထည့်ဝင်ငွေများ၊ ရံပုံငွေရှာပွဲများမှ ရရှိလာသည့်ငွေကြေးများနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံအစိုးရမှပေးအပ်သည့် အခြေခံထောက်ပံမှုများဖြင့် ရပ်တည်နေသည့် ရပ်တည့်နေမည့် အဖွဲအစည်းတခုသာဖြစ်ပြီး မည့်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်း အဖွဲ့များ၏ လက်အောက်ခံ မဟုတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာလူမျိုးများအရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လွတ်လပ်သော လူမှုကူညီရေး အသင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
The Finland Myanmar Society Ry also aims to actively work for Finnish-Myanma families as well as Myanmar families living in Finland by developing mutual connections and joint activities. The association's activities largely focus on free-time activities, which createanatural collaboration and cross-cultural understanding between the Finns and Myanma.
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသည့် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ၊ မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသည့် ဖင်လန်လူမျိုးများဖြင့် သာရေး၊ နာရေး၊လူမူရေး ကိစ္စများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များ အထူးအလေးထားလုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်နေမည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွဲပြားခြားနားသည့် ဘာသာစကား၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ ပြန့်ပွား နားလည်စေရန်အတွက် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် လူငယ်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) ၏ အသင်းဝင်များသည် အသင်း၀င်ကြေးအဖြစ် နှစ်စဥ်ကြေး ယူရို ၁၀၀ ကိုတကြိမ်တည်း ပေးသွင်း၍လည်းကောင်း၊ ၆ လတကြိမ် ယူရို ၅၀ပေးသွင်းလည်းအသင်းဝင်နိုင်သည်။ အသင်းဝင်များ၏ အသင်းဝင်ကြေးများ၊ ရံပုံငွေရှာပွဲများမှ ရရှိလာသည့် အမြတ်အစွန်းများဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မြိုနယ်များ၏ ထောက်ပံမှု ငွေကြေးများအခြေခံကာ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသည့် မြန်မာ မိသားစုများ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမူရေး ကိစ္စရပ်များအား အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းထားရှိသည့် အတိုင်း ပူပေါင်း လက်တွဲကာ ဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့် ဖြစ်ပေါ်မည့် အခြေအနေအမျိုးမျိုး ကိစ္စရပ်များအတွက် တတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကူညီအားဖြည့်ရန် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လမ်းစ၊ အဖြေရှာနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်လက်တွဲရန်လည်းစဥ်းစားထားရှိမည်။
ဖင်လန်နိုင်သို့ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ၊ ခလေးများအတွက် ရိုးရာယဥ်ကျေးမှုနှင့် မိခင်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးအတွက် အကောင်းဆုံး၊ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင် အစကြိုးစားအားထုတ်သွားမည်။
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် ဖင်လန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးများ၏ လှုမှုရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားပြန့်ပွားစေရေးသာမက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြေအနေများ၊ လူမှုစီးပွား၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဥ်များကို စဥ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်ကာ အလျဥ်းသင့်သလို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဖင်လန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အုပ်တချပ်၊ သဲတပွင့်အဖြစ် ကျရာနေရာမှနေကာပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
We Are Thankfull.0€ So Far!
1. Eradicate extreme poverty and hunger in Myanmar/Burma.
2. Achieve universal primary education in Myanmar/Burma.
Ensure that all boys and girls completeafull course of primary schooling in Myanmar/Burma.
3. Promote gender equality and empower women in Myanmar/Burma.
Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 2035, and at all levels by 2035 in Myanmar/Burma.
4. Reduce child mortality in Myanmar/Burma.
Reduce by two thirds the mortality rate among children under five in Myanmar/Burma.
5. Ensure environmental sustainability in Myanmar/Burma.
Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 2025.
6. Developaglobal partnership for development in Myanmar/Burma.
ဖင်လန်မြန်မာအသင်း (Finland Myanmar Society Ry) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့် ဖြစ်ပေါ်မည့် အခြေအနေအမျိုးမျိုး ကိစ္စရပ်များအတွက် တတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကူညီအားဖြည့်ရန် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လမ်းစ၊ အဖြေရှာနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်လက်တွဲရန်လည်း စဥ်းစားထား ရှိမည်။
Myanmar's Generation Z is an important demographic, and covers broad swaths of the economy. Its members are doctors and nurses, artists, bankers, railroad workers, teachers, LGBTQ activists, trade unions, students and many other social groups who have joined the protest.
The groups partially overlap and work together, but they also have different aspirations.
The current demonstrations are also fueled by celebrities like actors, musicians and bloggers. Burmese in exile, for example in Thailand and the United States, also play an important role in supporting the protests on social media.
We regularly publish selected volunteer opportunities. Some assignments are not published because they are filled by candidates whose profiles are matched directly from our Global Talent Pool. Some sponsored assignments may have additional eligibility criteria, which you will find in the PDF file linked to the special call.
Hämeentie 58-60 50 A, 00500 Helsinki, Finland.
Zoom ID 25612471442 [...]
Mobile: +358 (0)45 8937066
© 2021 -2023 Finland Myanmar Society Ry | Y-tunnus : 3190312-2
One of the best ways to help the needy children is to spread the word about Finland Myanmar Society Ry Needy Children & Orphan Project. The more people that know about the message of the Finland Myanmar Society Ry and what we are trying to achieve is beneficial in getting help and assistance that the needy children need.